တောင်ပိုင်းကာလီဖိုးနီးယားမြန်မာတရုပ်အသင်းရဲ့နှစ်သစ်ကူးပွဲ – SCBCA – XIV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တောင်ပိုင်းကာလီဖိုးနီးယားမြန်မာတရုပ်အသင်းရဲ့နှစ်သစ်ကူးပွဲ – SCBCA – XIV
တောင်ပိုင်းကာလီဖိုးနီးယားမြန်မာတရုပ်အသင်းရဲ့နှစ်သစ်ကူးပွဲ – SCBCA – XIV
Posted by Kyaemon on Mar 9, 2013 in Arts & Humanities, Community & Society, Education, Entertainment, Environment, Myanmar Gazette, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 11 comments
Chinese New Year Lunar New Year 2013 SCBCA
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာ အမေရိကန်ပြည် တောင်ပိုင်းကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်
Los Angeles လောအင်းဂျီးလစ် ရောက်
Southern California Burma-Chinese Associationတို့က
ကျနော့ဆီကိုပေးပို့လာတဲ့ email link လင့်ခ က ဓာတ်ပုံ ၂၂၅ ပုံမှ
ဓာတ်ပုံဆရာ ကိုHenry Kao ရဲ့လက်ရာတွေပါ၊
သူကအပင်ပန်းခံပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စုံစုံလင်လင် ရိုက်ခဲ့ကြောင်းသိသာတာပါ၊
ကျန်တာကြည့်နိုင်ဘို့အောက်ပါ link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ၊
ပွဲမစခင် အမျိုးသမီးပါဝင်တဲ့ ခြင်သေ့နှစ်ကောင်မှဝိုင်းတော်သား
ပွဲမ စ ခင် က လူတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ နံမယ်ကျော်
မ လေးနိုင်အိ က အလှပြင်နေပုံ
သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ စုစုစည်းစည်း ရှိကြကြောင်းပါ)
တရုပ်ပြည် Inner Mongolia အတွင်းမွန်ဂိုလီရားပြည်နယ် အ “က” ပါ၊
“က” ပြ တဲ့ အောက်ပုံပါ အမွှာပူး အမျိုးသမီးနှစ်ဦး “မေဟွာနဲ့လန့်ဟွာ” တို့က
အဖေ က ဘို (အဖြူ) အမေက တရုပ် အမျိုးသမီးပါ၊
နံမယ်ကျော် အကယ်ဒမီဆုရ အဆိုတော် မေယု က ဖြေဖျော် သီဆိုနေတာပါ
Rosemead မြို့နယ်ကောင်စီကကြီးမှူးတဲ့Line Dance အဖွဲ့ရဲ့နည်းပြဆရာမတဦးဖြစ်သူ
Elizabeth Khoo က ဦးဆောင်တဲ့ SCBCA အသင်းသူ
မြန်မာဇာတိနွယ်တွေက India အိန်ဒိယ အ က နဲ့ဖြေဖျော်တာပါ၊
ပရိသတ်အကြား လိုက်လံ က ပြပြီး၊ ဂါရဝပြု နှုတ်ခွန်းဆက်သ နေတဲ့ ခြင်သေ့
လူတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ နံမယ်ကျော် မ လေးနိုင်အိ ရဲ့ တပင်တိုင် အ က
အသင်းသားတဦးရဲ့ ထူမ ချင်လိရီ က တယောထိုး ပြီးဖြေဖျော်နေတာပါ၊
သူမရဲ့တူရိယာ တေးဂီတအနုပညာ က ကောင်းမွန်ပြောင်မြောက်လွန်းလို့
ပရိသတ်တွေက အထူးဘဲကြည်နူးနှစ်သက်ကြပြီး ချီးမွမ်း ကြကြောင်း၊
ငယ်ရွယ်သလောက် တရုပ်ပြည်Canton/Guangzhouနဲ့ Macau ဂီတပြိုင်ပွဲတွေမှာ
ဆုတွေကိုဆွတ်ခူးခဲ့ကြောင်း၊တေးဂီတအဖွဲ့တွေနဲ့အတူMalaysia နဲ့ Hong Kongကို
ရှေ့မှာဖော်ပြပါ ၁၆ နှစ်အရွယ် အမွှာပူး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးက
တရုပ်ပြည် Yunnan ယူနန်ပြည်နယ်မှ Dai/Thai ထိုင်းလူမျိုးစုရဲ့
ဒေါင်း အ က လို သီးခြား တဖန် “က” ပြ ဖျော်ဖြေ ကြတာပါ၊
တရုပ်နိုင်ငံ CCTVရဲ့၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားမှာCeline Dionနဲ့ Song Zuyingတို့က
တရုပ်ပြည် Yangtze ရန်ဇီမြစ်တောင်ပိုင်း ဒေသ က မိုးရာသီ
ဆိုပြီး အခြေခံတဲ့ “ထီး” အ က
တောင်ပေါ်မှာ လက်ဘက်ရွက်တွေ ခူးစဉ် က ဆိုပြီး
အခြေခံတဲ့ ယပ်တောင် အ က
လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ပြီး မရိုးနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ
ဦးရွှေရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးတို့ရဲ့ (လူပျိုလှဲ့) အ က ပါ၊
အမူအရာနဲ့ အ က တွေ က သွက်လက်ပြီး
လာအိုးနိင်ငံကတရုပ်နွယ်ဘွားDavid Chen ရဲ့မျက်လှဲ့ အစွမ်း
Los Angeles မြောက်ပိုင်း မိုင်တရာကျော်ဝေးတဲ့ Santa Clarita အရပ်ကနေကြွရောက်ပြီး
အားပေးတဲ့ မြန်မာဇာတိနွယ်Peter Ngoon အဖွဲ့တို့ရဲ့Kung Fu ကွမ်ဖူး သိုင်းပညာအစွမ်း
အော်…ဒါလောက်အကတွေများလို့ သဂျီးက မသောက်ပဲမူးတယ်လို့ ပြောတာကိုး။
ကလေးတွေ စင်ရှေ့မှာ သွားအားပေးကြတာ ပျော်စရာကြီး။
ဒါထက် ကပြဖျော်ဖြေတာ လူကြီးတွေချည်းပဲ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါရစေ… အသင်းနာမည်က စောက်CAတရုတ်မြန်မာအသင်းလို့ ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဖွား တရုပ်များနဲ့ တရုတ်-မြန်မာ သွေးနှောသူများ၊ မြန်မာများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းဓလေ့များကို တင်ဆက်ရပါမယ်… အခုတော့ ရည်ရွယ်ချက် သွေဖီနေပါပြီ၊ အမှောင့်ပယောဂ တခုခု ပူးကပ်နေပြီလို့ ယူဆပါကြောင်းနဲ့…. ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် သွေးကွဲစရာ ဖြစ်ဖို့ရှိကြောင်း အဲဒီစောက်အသင်းလူဂျီးများကို ဤနေရာမှ ဝေဖန်သမှု ပြုပါ၏။
ပုံ.. အယ်ချုပ်သမက် ရှယ်ကျုပ်မှတ် :cool:
မြွေဟောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ ဗမာ့စစ်သဘောတရား
ထိုင်းအစိုးရကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တဲ့ ဝါဒဖြန့်ချက်ထဲမှာ Cobra Gold စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲလုပ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အားသစ်လောင်းခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို နယ်စပ်မှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးတဲ့ ထိုင်းအစိုးရကို မကျေနပ်တာဟာလည်း ထိုင်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရတွေကလည်း နယ်စပ်နေလက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကို ကြားခံအင်အားစုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာရအစိုးရတွေရဲ့  သဘောထားပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထိုင်း-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးမှာ အတက်အကျရှိပေမယ့် မြန်မာ့စစ်သဘောတရားမှာ တရုတ်ကို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာမီ ကွန်မြူနစ် ပုန်ကန်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ဗမာအစိုးရတပ်ဟာ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ကို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ တရုတ်ကျူးကျော်တာကို နယ်စပ်မှာ သုံးလခုခံနိုင်မယ့် စစ်တပ်ကို တည်ထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စစ်သဘောတရားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အယူအဆကို ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်က အရင်ဆုံး တင်ပြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗမာကွန်မြူနစ်ကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်က နှစ်ပေါင်းများစွာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကူညီခဲ့တာဟာလည်း မယုံကြည်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ မဆလခေတ်မှာ တရုတ်တပ်သားတွေ ဗကပဘက်က ကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ဗမာအစိုးရတပ်မှာ အကျအဆုံးများခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့ မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ စစ်ဦးစီးဌာနက ၁၉၇ မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ နယ်မြေလုံခြုံရေး စီမံချက်မှာလည်း တရုတ်ကိုရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ၂၀၁၀ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် ရှမ်းသံတော်ဆင့်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဗမာစစ်အစိုးရဟာ တရုတ်အကူအညီရယူခဲ့တာ (၉) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အရှေ့ မြောက်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေကတော့ အရင်က စစ်သဘောတရားအတိုင်း တရုတ်ကိုရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မဟာဗျူဟာလိုအပ်ချက်အရ မြန်မာပြည်ကို တရုတ်ကသိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် မြစ်ကြီးနား၊ လာရှိုး နဲ့ ကျိုင်းတုံ စတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက ဝင်လာနိုင်တယ်လို့ တွက်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ လူမှုရေး နဲ့ စီးပွားရေးအရ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကျူးကျော်မှုကို တွန်းလှန်ရာမှာ ပြည်သူ့စစ်ကို အပြည့်အဝ သုံးရမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်၊ ကြက်ခြေနီ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ စစ်တပ်လက်အောက်ခံ ပြည်သူစစ်စတာတွေကို ညီနောင်အရံတပ်ဖွဲ့တွေအဖြစ် ဖော်ပြပါတယ်။ တရုတ်ကျူးကျော်မှုကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှာ မဟာဗျူဟာမှာ ခံစစ်သုံးပြီး နည်းဗျူဟာမှာ ထိုးစစ်ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မဟာဗျူဟာမှာ ရေရှည်တိုက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ပြီး နည်းဗျူဟာမှာတော့ ရေတိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၆၉ မှာ တရုတ်စစ်သား ၅၀၀၀ ကျော် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဝင်လာပြီး ဗကပဘက်က ကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ အဲဒီနှစ်က အကျများတာကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကိုယ်တိုင် မဆလပါတီ ညီလာခံမှာ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိမိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက် တရုတ်အကူအညီ အများအပြားယူနေတဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရဟာ ရေရှည်မှာ တရုတ်ကို အန္တရာယ်လို့ အစဉ်အလာအတိုင်း မြင်နေတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
မေမြို့ စစ်တက္ကသိုလ် သုတေသီ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်လှ ၂၀၀၄ မှာ တင်ပြတဲ့ စာမျက်နှာ (၃၄၆) ပါ မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးစာတမ်းမှာလည်း တရုတ်ကို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ စစ်သဘောတရားကို ဖော်ပြတယ်လို့ အဲဒီစာတမ်းရရှိထားသူ
Bertil Lintner က ဆိုပါတယ်။ သံတမန်ရေးနဲ့ စီးပွားရေးမှာ တရုတ်ကို အားကိုးတာဟာ အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားပြီး တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက လက်ခံနိုင်တဲ့ အစိုးရမျိုးနဲ့ အစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင် စစ်တပ်အနေနဲ့ လမ်းစဉ်သစ်ချမှတ်ရတာပိုပြီး လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ အောင်ကျော်လှရဲ့  စာတမ်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒီသဘောတရားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်အားကိုးမှုကို လျှော့ချလိုက်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာအောင် အရပ်သားတပိုင်းအစိုးရကို စစ်တပ်က ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရပေါ်ထွက်လာတာ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ တခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ ဦးဆောင်တဲ့ရွှေမြွေဟောက် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာ မြန်မာပါဝင်လာတာဟာ တရုတ်ကိုချည်း မှီခိုအားထားတာမျိုး မလိုလားကြောင်း ဗမာစစ်တပ်က ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အကူအညီနဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့တာကို အန္တရာယ်လို့မြင်ပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့ လက်တွဲဖို့ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
Shwe OoDaung says:
ငဒေါင် နင့်ဟာနင် ရွှေဥမကလို့ လအုဖြစ်ပလေ့စေ ယီးထင်သကွ….။ ဝလည်းရှိတယ် ကိုးကန့်လည်းရှိတယ် လက်မှတ်မဲ့ တလုပ်တွေလည်း တဗုံဂျီး မန်းလေးမှာ…. ။ ငါ့ရူးတယ်ပြောရအောင် နင်က ဘယ်လောက်ပေါနေလို့လဲ….။ ကြေးမုံဂျီးနဲ့ငါ အခြစ်စမ်းတာ နင့်အပူ တပြားသား ပါလား…။ မနေနိုင်ရင် ကိုယ်ဟာကိုယ် ကလိနေ…။ သဂျီး… တားကို တူအရင် လာစဒါ….. :eee:
ဆြာရွှေဥစောင်း ဆိတ်ထိန်းပါဗျာ မီလိန်မိုး မီလိန်မာမို့ခွိ လွှတ်လိုက်ပါဗျာ
ရွှေအုဒေါင်း လေဖုဖောင်း ဂွေထုထောင်း မြွေတုရောင်း… :harr:
စားပွဲမှာ ပန်းရောင်နဲ့ တစ်ယောက် က သဂျီးကတော် မှတ်တာပဲ
သဂျီးကတော်က ပန်းရောင်ခရေဇီ ပေါ့
i want to see u kyaung gyi pboto in this group (may be u shwe yoe dancing is him) ::::::)))))))
တနေ့က သဂျီးပြောတဲ့ ပွဲကိုး…
ဟေ့ ငအုဒေါင် လာလကွာ … ကြောက်ပီလားကွ.. ဗေထိဗေထိ ဗေပုံထိ
ဖြောင်း…ဖြောင်း..ဖြောင်း (လက်ခမောင်းခတ်သံ) :harr: